Iindaba -Ungayikhetha njani iMipu yaManzi
Ngokunyuka kobunini bemoto, ixabiso lokuhlamba iimoto nalo lenyukile. Uninzi lwabanini bemoto abaselula bayitshintshile imbono yabo ukuze bakhethe ukuhlamba okungabizi mali ininzi, okukhawulezayo, okufanelekileyo, kunye nokusingqongileyo. Xa uhlamba imoto ekhaya, kunyanzelekile ukuba ube nemoto ehlamba umpu wamanzi. Xa uthenga umpu wamanzi wokuhlamba imoto, ukuqaphela uphawu kubaluleke kakhulu. Ke loluphi uphawu lwemipu yokuhlanjwa kwemoto ekhaya olungcono? Abanye abanini zimoto bathenga umpu wamanzi oxinzelelo oluphezulu, kwaye abanye abanini beemoto bathenga iwasha yeemoto ephathekayo. Makhe sijonge indlela yokuthenga umpu wamanzi ophakamileyo wokuhlamba iimoto zasekhaya.
Xa abantu bekhangela kwiiwebhsayithi ezahlukeneyo zokuthenga kwaye bafumanisa ukuba zininzi iintlobo zemipu yoxinzelelo oluphezulu lwamanzi okuhlamba imoto, kwaye umahluko wamaxabiso nawo mkhulu kakhulu. Ezinye zibiza i-yuan ezingama-20 ukuya kuma-30, ngelixa ezinye zibiza ama-yuan amabini ukuya kwamakhulu amathathu. Ukuphendula imibuzo enje ngala "Loluphi uphawu lompu wamanzi woxinzelelo oluphezulu lokuhlamba imoto ulungile", sikuqokelelele ulwazi.
Ukuhlanjwa kwemoto yendlu umpu wamanzi ophakamileyo sisisixhobo sokucoca esisebenzayo esenzelwe ngokukodwa iimoto zosapho, ezinezibonelelo zokonga amanzi, uxinzelelo kunye nokhuselo lokusingqongileyo. Okwangoku, zininzi iimveliso ezinemipu ephezulu yokuhlanjwa kweemoto ezithengiswe kwi-Intanethi, iimveliso ezinokuthenjwa ezikumgangatho ophezulu kubandakanya uHuber, uTiger Knight, uGabriel no-Orichi.
Izinto eziluncedo ngoxinzelelo oluphezulu lwemipu yokuhlanjwa kweemoto zasekhaya
1. Kulula ukuyisebenzisa
Ukusetyenziswa ngokulula lolona ncedo lukhulu kuxinzelelo oluphezulu lombhobho wamanzi wokuhlanjwa kwemoto yendlu. Ukuba awukho umpu wamanzi oxinzelelekileyo wokuhlanjwa kwemoto yendlu, ukuhlamba kwethu imoto kuya kuba yingxaki kakhulu. Ngaphandle kompu wamanzi oxinzelelekileyo wokuhlamba imoto, sinokuhlamba kuphela imoto ngebhakethi xa uhlamba imoto. Inokuba udiniwe kakhulu. Ukuba sinompu wamanzi, singayiphepha le ngxaki, ukuze songe amandla xa sihlamba imoto, kwaye akufuneki sibaleke sihamba nebhakethi. Ukuvaswa kwemoto ngompu wamanzi nakho kucoca, kwaye kulula ukucoca imoto. Xa uhlamba imoto ngebhakethi, amanzi akukho lula ukuba ome, kwaye iinxalenye zeemoto zonakaliswa ngokulula ngamanzi.
Xa uhlamba imoto, amanzi asetyenziswa kakhulu. Xa sihlamba imoto ngebhakethi, imoto ihlanjwa okwempuphuma. Ukugcina amanzi kubaluleke kakhulu kuthi. Abahlobo abaninzi bemoto baya kuthi abawahoyanga amanzi. Awukhathali kodwa imoto yakho iyakhathala. Ukuba kukho amanzi amaninzi emzimbeni, iya kungena ngokulula kwezinye iindawo ezinobuthathaka emotweni. Xa siqala, kunokwenzeka kakhulu ukuba ingasebenzi kakuhle. Izibane eziphambili zeemoto ngumzekelo olungileyo. Kwiimeko ezininzi, ukonakala kwezibane zangaphambili zemoto kubangelwa ngamanzi angena kwisibane.
Ungayikhetha njani umpu wamanzi oxinzelelo oluphezulu?
Okwangoku, eyona nto ibaluleke kakhulu ekuthengeni umpu wamanzi oxinzelelo oluphezulu zizinto zokusebenza, ubugcisa kunye neenkcukacha, hayi uphawu. Okulandelayo, siza kwabelana nawe ngamava kunye nezakhono zokuthenga uxinzelelo oluphezulu lwemipu yokuhlamba imoto.
1.Kujonga umlomo wombhobho wamanzi ophakamileyo.
Umbhobho wokuhlanjwa kweemoto umpu wamanzi awulula kangako, eneneni unolwazi. Elona candelo lisemngciphekweni wombhobho wamanzi oxinzelelo oluphezulu ngumbhobho. Kungcono ukhethe umlomo owenziwe ngobhedu.
2.Khangela ithumbu lombhobho wamanzi ophakamileyo.
Ithumbu lombhobho wamanzi oxinzelelekileyo kufuneka linganyangeki kuxinzelelo, ukubanda, ubushushu obuphezulu, umhlwa kunye nokuguga. Iingcebiso: Ithumbu elisezantsi loxinzelelo oluphezulu lithambile. Emva kokugcwaliswa ngamanzi anoxinzelelo oluphezulu, ziya kugqabhuka ngokulula xa zityunyuzwe ngamavili, kwaye ziya kuguga ngokulula emva kokusetyenziswa ixesha elide. Kungcono ukhethe umbhobho wokuhlamba imoto owenziwe nge-EVA okanye ngePVC.
3.Kujonga uxinzelelo lwamanzi lompu ophezulu wamanzi.
Kuyaziwa ukuba xa kucocwa ngompu wamanzi oxinzelelekileyo, nokuba ukucoca kucocekile kuxhomekeke ikakhulu ekubeni uxinzelelo lwamanzi olufafazekileyo lomelele na. Ukuba uxinzelelo lwamanzi lutshiziwe luncinci, luyakuchaphazela kakhulu isantya sokucoca kwaye umpu wamanzi oxinzelelo oluphezulu unokuhlala uvelisa uxinzelelo lwamanzi, ukuze ufezekise injongo yokususa ngokukhawuleza nangokupheleleyo amabala emoto.
4.Kujonga izinto ezibonakalayo zompu ophezulu wamanzi.
Umgangatho wemathiriyeli yokujongana nompu wamanzi ichaphazela ngqo ubomi benkonzo yompu wamanzi oxinzelelo oluphezulu. Umpu wamanzi oxinzelelo oluphezulu ngokubanzi usebenzisa zonke izinto zobhedu njengemathiriyeli yentloko yompu wamanzi kunye nembonakalo yombhobho wamanzi, ngelixa isithuthi esinexabiso eliphantsi sokuhlamba umpu wamanzi sisoloko senziwe ngeplastiki. Unomdla wokuvuza kwamanzi kunye nokuzinza okungafanelekanga.
5.Gcina inqanaba lokudumisa kunye nomthamo wentengiso yemipu ephezulu yoxinzelelo lwamanzi.
Ukuba umntu ucwangcisa ukuthenga uxinzelelo oluphezulu lwemipu okanye izixhobo zokuhlambela imoto kwi-Intanethi, unokujonga kwintengiso kunye nokuhlelwa okuhle kwemipu ephezulu yoxinzelelo lwamanzi. Ixabiso lokuthengisa kunye nelokudumisa umpu wamanzi oxinzelelekileyo wokuhlanjwa kweemoto zasekhaya zimele kwinqanaba elithile apho le washer yemoto yamkelwe ngayo ngabanini bemoto.